DEG-DEG: Tottenham Oo Ugu Dambayn Ku Dhawaaqday Tababaraheeda Cusub Kaddib Dersin Macallin Macallimiin Ah Oo Diiday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Tottenham Oo Ugu Dambayn Ku Dhawaaqday Tababaraheeda Cusub Kaddib Dersin Macallin Macallimiin Ah Oo Diiday
DEG-DEG: Tottenham Oo Ugu Dambayn Ku Dhawaaqday Tababaraheeda Cusub Kaddib Dersin Macallin Macallimiin Ah Oo Diiday
Tottenham ayaa heshay tababare cusub oo hoggaamin doona xilli ciyaareedka soo aaddan, kaddib tiro tababareyaal oo hore iskaga diiday.
Spurs ayaa tababare la’aan ahayd tan iyo markii shaqada laga caydhiyey Jose Mourinho iyadoo uu socdo horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkii hore oo marayay kulamadii ugu dambeeyey.
Mulkiilaha ahna guddoomiyaha Tottenham ee Daniel Levy ayaa isku dayay tiro tababareyaal ah oo uu xidhiidh la sameeyey si ay ugu noqdaan beddelka Jose Mourinho, waxaana tababareyaashaas ka mid ahaa Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Gennaro Gattuso, Paulo Fonseca, Frank Lamprd iyo kuwo kale.
Laakiin ugu dambayntii waxa ay Tottenham heshay tababarihii dhowaanta iska casilay Wolves ee Nuno Espirito Santo oo loo magacaabay tababaraha cusub ee Spurs hoggaakmin doona xilli ciyaareedka soo aaddan.
Nuno Espirito Santo oo u dhashay Portugal ayaa hore wada-hadallo ula galay kooxaha Everton iyo Crystal Palace oo tababareyaal la’aan ahaa, laakiin waxa uu ugu dambayntii doortay Tottenham oo uu u saxeexay heshiis laba sannadood ah.
Kaddib markii uu heshiiska saxeexay, Santo ayaa u sheegay website-ka Tottenham hadalladan: “Marka aad haysato koox ay joogaan ciyaartooyo tayo iyo hibo leh, waxa aanu doonaynaa in aanu taageereyaasha ka dhigno kuwo hanweyn oo faraxsan.
“Farxad aan la qiyaasi karin iyo sharaf ayay ii tahay in aan halkan imaaddo, waxa aanan rajaynayaa in aan bilaabo shaqada. Ma haysano maalmo aanu lumino, waa in aanu si degdeg ah u bilowno shaqada, maalmo yar gudahoodna ku bilowno diyaar-garowga xilli ciyaareedka.”